Zonke izakhamuzi inhlokodolobha ngabomvu lapho evula esiteshini "Hovrino", okuzoba esitobhini sokugcina enyakatho kwesigaba Zamoskvoretskaya legatsha umasipala eMoscow. Kusukela ekuqaleni komsebenzi walo traffic nzima isimo kufanele zixazululwe, isungule endaweni into yamanje. "Umfula Station". Mayelana nalesi siteshi okwengeziwe ukufunda kulesi sihloko.
Emhlanganweni olandelayo ngo-2011, kwanqunywa ukunweba Zamoskvoretskaya umugqa, ukuze esiteshini omusha eMoscow "Hovrino" (Underground) kufanele ivele khona. Lapho elivula kwenzeke, khona-ke namanje ngempela isinqumo, ngoba usuku beqeda ukwakhiwa lihlehliselwe izikhathi eziningana.
Ngo-2013, eMoscow ekomidi lezemihlaba ukwamukele uhlaka lohlelo futhi kufakwe lesi sitshalo elithi kokuthuma ekupheleni 2016. Ekuqaleni komhlaba wabizwa ngokuthi "Ulitsa Dybenko", okuyigama mgwaqo elisemngceleni yokungena esitimeleni. Kodwa ngemva abayicela Muscovites Imeya unqume ukuthi kuzokwenza isiteshi "Hovrino", yaqanjwa esifundeni igama elifanayo, lapho itholakala.
Lokhu kaMasipala entsha has ikholomu isakhiwo dvuhprolotnoy engajulile. Isiteji esiqhingini ngeke neze ezibanzi elilingana amamitha ayishumi. "Hovrino" esiteshini kufanele abe ambalwa Ezindaweni zokwamukela izivakashi, kanye kweminyango ukuze komhlaba yokuwela yabahamba ngezinyawo futhi ezihlobene esizihambelayo uhamba. Ngaphezu kwalokho, entsha komhlaba yokupaka uhlelo ukwenza ekuthumbeni, yakhelwe ezingaphezu kwenkulungwane imishini.
Izindonga, ophahleni kanye phansi ahlotshiswe izikwele egandayiwe ezibukwayo lekufanele izingxenye core ukhonkolo. Station "Hovrino" ngokuvumelana amacebo abaklami kufanele abe kuhleliswa ezimhlophe wedwa futhi shades brown.
I amamitha amasha uzobe etholakala engxenyeni esentshonalanga Dybenko emgwaqweni, lapho ephambana nge emgwaqweni. Zelenograd eduze izindlu olunezinombolo 34 futhi 38. Station "Hovrino" ukuze elingamamitha angamakhulu ambalwa nje ukusuka lapho kuhlangana Businovskaya akunika avuke okusha Leningradke, futhi eduze Ring Road.
It is kuhlelwe ukuthi by the metro omusha uyoba ukudlula 400E inombolo ibhasi, okuyinto okwamanje ugijima phakathi Zelenograd nasezindaweni "River Station".
Yokulinda itholakala engxenyeni esenyakatho esiteshini, lokho kuyoholela endaweni lohleliwe ezokuthutha kanye kokwehla site. Futhi, nasezitimeleni ungathola phandle emgwaqeni. Dybenko okuphambene 42 th endlini yayo noma emgwaqweni ofanayo, nje eduze izinkomba ugu. Zonke Ezindaweni zokwamukela izivakashi sizoxhunywa yesikhulumi kaMasipala.
Inani isiteshi esisha
Kubalulekile kakhulu enhlokodolobha isitshalo "Hovrino" (nangaphansi komhlaba). Lapho uvula iyokwenzeka ngokushesha ukuthuthukisa ezokuthutha abahlali enyakatho yeMoscow. Ngemva kokuqala ukusebenza kwe-ukwehla komhlaba umthwalo kabili ngokweqile endaweni kamasipala "River Station" bese ethula Leningrad onguthelawayeka.
Izoqala nini ke komhlaba, abantu eMoscow eze phezu M11 ube ezokuthutha zabo, uzokwazi ukushiya imoto ngesikhathi abaphuca yokupaka. Eceleni maphakathi nenhloko-dolobha, bakwazi ukulandela North-Eastern ongaphansi komhlaba kuzithinta noma uthumele kwabanye ezokuthutha zomphakathi.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yalesi ongaphansi komhlaba sizoxhunywa uMkhosi emgwaqweni Dmitrovskoe onguthelawayeka. Ngakho-ke, sihlelwe ukuthi ukulayisha esiteshini emva wokuvula yayo kufanele azisizi mayelana 130 000 abagibeli ngosuku, bese ngokwanda ngokuhamba kwesikhathi abantu abangu-150 000.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, impande ukushintsha logic of the traffic futhi abagibeli isiteshi esisha eMoscow "Hovrino". Ukuyivula kuhlelelwe Disemba kulo nyaka. Lo mcimbi ngabomvu abakhileyo izifunda enyakatho yenhloko-dolobha nasezindaweni ezizungezile.
Ukuze asheshise inqubo ukwakhiwa, amakhulu ochwepheshe futhi inani elikhulu amahora umsebenzi ayehlonzelwe. Ngakho-ke, ezitimeleni, ebhekisela legatsha Zamoskvoretskaya, kancane kancane iqala ukuthatha ukubukeka esiphelele. Kulesi sigaba yokwakhiwa kakade usezuze lamatshwayo vestibules kanye izindima komhlaba. Kusukela amazwana osonkontileka kuba sobala ukuthi omunye Umhubhe isidlulile ngokuphelele, futhi imisebenzi yesibili ku wokwenziwa kweengaba zokugcina. Kule singaphetha ngokuthi umnqamulajuqu kukhonjisiwe ukusebenza kamasipala SOMBHALO sisaba ibekezelelwe.
Qala umsebenzi esiteshini Kwakuhlelwe ngaphambili, kodwa ukutholakala yayo baphoqeleka ukuhlehlisa kokuphela konyaka, nokushintshwa osonkontileka, okwaholela isikhathi ukubambezeleka nesikhathi ukulahlekelwa lagcwaliseka. Plant nokuthuma kuyokwenzeka ngezigaba ezimbili. Ngakho, umuntu ubengacabanga ekuqaleni ukuvula wokubawa abantu bayisekele, bese yesibili.
Endaweni lapho okuhlatshelwa khona ukwakha esiteshini, njengenhlangano ezokuthutha engeyokuqala ebalulekile nokutshala kufanele ihlelwe. Kube iyokwakhiwa kwenye ingxenyekazi Okthoba w / w komgwaqo, futhi endaweni ngeke zithole ibhizinisi namabhizinisi izikhungo ezintsha.
Agunyaziwe umphathi-dolobha futhi wagcizelela ukuthi, ngaphezu kaMasipala omusha, endaweni okusadingeka wazakhela ukwakhiwa komgwaqo emikhulu, okuyinto edinga eMoscow kangaka. Station "Hovrino" kanye indawo eduze kuyoba yingxenye ebalulekile ye kuvuselelwe kanye North-East of kuzithinta.
Ngemva kuvulwa eMoscow Metro e amacebo neziphathimandla zedolobha e elula phakathi Art. "Hovrino" futhi "River Station" ukwakha omunye ongaphansi komhlaba okuthiwa "White Sea Street". Isisekelo ke usukulungele, zadalwa ngesikhathi kwakhiwa imihubhe.
Elingcolisa emoyeni emzini? Yini izinto kungcolisa emoyeni?
Druskininkai Aqua Park, Lithuania: i Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Inani igama Clement: ukuhumusha umsuka kanye imfihlakalo
United States Amandla - Umlando Nezanamuhla
Poll eyimpumelelo: Hlobanisa inani imibuzo kanye nenani isikhathi uphendule Amafomu Ukudala
Stone shungite ngoba umshini ohlanza amanzi: ukubuyekezwa, izakhiwo, isicelo kanye nempumelelo
Isilinganiso se-spinnings ye-gig (ukubuyekezwa)
Kungani abazali eNdiya nanini bajezise izingane zabo?
I-Libra Constellation Libra
Ngezokuvakasha - abaku- emakethe yezabasebenzi?